Youku.com waa ugu jeclaa video marti websites ee Shiinaha sida habka ugu Youtube waa in qaybaha kale ee adduunka. Sidoo kale, waa caadi in dadka u arkaan in ay qayb ka eheeyn marka ay timaado diinta videos ka goobtan caan ah in ay qaab jecel. Maqaalkani waxa uu isku dayi doonaa si wax looga fahmo sida mid soo celiyo karaa youku videos in qaab MP3. Dabcan waxaa jira fursado badan oo aad halkaas isku dayi kartaa laakiin waxaanu sameyn doonaa eegno oo kaliya laakiin dhawr farsamooyinka ugu caamsan iyo aad u wacan yahay.
o Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee diinta youku in MP3 waa adigoo isticmaalaya downloader youku ah. Tani waa mid ka mid ah haddii aan downloader kaliya ee warbaahinta in mid been abuur in ay si gaar ah ula shaqeeya Youku.com. Ma aha oo kaliya ma software ayaa taas samayn si fiican ee lagu badbaadinayo videos kuwa aad jeceshahay galay your computer, laakiin waxa ay sidoo kale ka shaqeeya doonaa loo riyaaqo si fiican diinta video ah mid ka mid ah qaabka wax soo saarka la doonayo. Mid ka mid All uu leeyahay inuu sameeyo waxa la dooran isaga ama iyada doorashada ay dhacdo in this qaab MP3 ah oo aad samaysay! Interface ayaa sidoo kale waa mid aad u saaxiibtinimo, waa inaan iraahdo. Software ayaa sidoo kale waa diyaar ahaadaan si loogu download oo lacag la'aan ah oo laga helay ilo kala duwan oo ay ka mid yihiin cnet.com.
Waxaa kaloo jira bogag aad u wanaagsan in looga adkaan karin marka ay timaado qaab beddelidda, video. Khiyaar ah in aan aadka u talin lahaa hawshani waxa weeye http://www.free-videoconverter.com/. In tani ahayd, oo aad u baahan tahay inaad samayso waa geliyaan video ah oo la siiyey in aad soo bixi ama halkii badbaadiyey in your computer oo badalo! Kaliya u hubso in aad doorato MP3 doorasho sida qaabka wax soo saarka la doonayo. Sidee sahlan waa in? Interface ayaa sidoo kale waxaa aad u soo socda sidaas aad u fududahay in la isticmaalo. Ma waxaad u rumaysan weydeen? Fiiri shaashadda hoose. Waxaa intaa dheer, sida link dambe soo jeedisay, website-kan waa lacag la'aan.
My liiska aan noqon lahaa dhameystiran haddii aan ku xuso software allmytube wondershare! Ama Kaliya aan dhaho waxaan u badan tahay in aanay samayn, raalli ka tago baxay sida qalab diinta video awood leh liiskan. Waxaad heli kartaa in ay helaan madal adigoo si fudud u riixaya link www.wondershare.com iyo degsado software ah.
Software waxaa la heli karaa ee kombiyuutarada socda daaqadaha iyo madal Mac. Dhinaca kale la qalab hubaashii waa xaqiiqda ah in aad u baahan doontaa inaad iibsato software ah u sameeyaan iibiya, laakiin sida caadiga ah wax kasta oo wanaagsanu yimaado qiimaha ah. Quruxdii dadka wax halkan waa in aad heli doontaa in ay helaan muddo tijaabo lacag la'aan ah oo kaliya waa hadii aad ka shakisan tayada qalabka. Si aad bashaash, Wondershare shaqeeyaa yaabab marka ay timaado youku video diinta iyo downloads, taasu waa in aan ku xuso ay rikoor track xaqiijiyay in boqortooyadii reer Youtube video diinta. Waxaan sharad ma waxaad ka heli doontaa niyad software maxkamadda iskaba daa software buuxda!
YTD video downloader ka mid yahay qalab kale oo fiican in si fiican u shaqaynayaan in degsado videos ka bogag badan oo ay ka mid yihiin youku.
Software ayaa sidoo kale waxaa si fudud la heli karo si xor ah goobaha badan oo ay ka mid yihiin sida www.ytddownloader.com iyo www. cnet.com. Si kastaba ha ahaatee waxaa looga baahan doonaa in aad iibsato shati sanadlaha ah haddii aad tahay inay ku raaxaystaan ​​xuquuqdooda mudnaanta buuxa -full. Qiimaha waa jaban si kastaba siiyey in ay tahay $ 29 oo kaliya halkii sanno! Ma xisaabta iyo in ay timaado in ku dhowaad laba iyo doolar bil ah oo aan ahayn in xun tixgelinayo Kaalmooyinka dhaqaale oo aad u helaan doonaa qalab kala bar ah.
Software kale aan u muuqdaan in badan oo jecel waa wax video Converter. Tani waa mid ka software caan ah oo uu si fiican ugu diinta Dufcaddii
inkastoo heerarka la mid ah guusha ee soo saarista biyaha durdurrada audio ka video files. Ha noqoto ee Sphere ee Waxaad tube, youku ama wax la mid ah website-yada kale hosting, software ah waxay maamushaa si loo bixiyo tayo tobankiiba sagaal jeer! Waa software liiska in la soo saaro, waayo, Mac iyo daaqadaha labadoodaba laga yaabaa in uu sharaxayaa ay caan suuqa. Waxa kale oo ay sharaxaysaa sababta wax video Converter waxaa aadka loo qiimeeyo ee ay users adduunka oo dhan. Qalabkani waxa uu dhab ahaan waa mid ka mid ah qalabka doorashada la youku video diinta iyo downloads.
www.anything2mp3.com waa Converter kale online in uu mudan yahay in liiskan. Waa website ay ku takhasusay diinta ka mid ah videos ka websites in kaliya mp3. All mid uu leeyahay inuu sameeyo waa paste link video on box convertes hoos ku qoran iyo guji diinta si loogu badalo video ay u mp3 la doonayo ee qaab-waa in starightforward oo fudud.
Wareejinta waxaa sidoo kale si degdeg ah maadaama ay sida caadiga ah qaadataa Daqiiqad ama laba ku xiran tahay dhererka iyo size of video la badaley.
Xmlbar video Converter waa mid ka mid software kale ee aad isku daydo in aad la youko video diinta.
Waxaa Sarre awoodaha la xaqiijiyay la videos ee soo diyaariyeen balaadhan oo ah qaabab sidaas u shaqeeyo weyn oo youku qaab video .Waxaa software leeyahay xawaare diinta ka weyn lammaaneeyey ay awoodda si loogu badalo files badan oo aan inta badan Converter fuss.This ah waa lacag la'aan ah iyo la downladed karaa xmlbar .net.
Ka hadalka ah websites raqiis ah oo si fudud loo isticmaali u diinta video, wap4.org waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican halkaas.
Sida inta badan website-ka kor ku xusan, waxaad u baahan doontaa in ay geliyaan video ah youku iyo doortaan qaab mp3 ka dibna riix on diinta. Si kastaba ha ahaatee website The xadka soo gudbin Uploads ugu badnaan 100mb per file. Sidaas oo ay tahayna waa mid ikhtiyaar aad u wanaagsan.
9.FLV in mp3 Converter
FLV in mp3 Converter waa codsi kale oo si weyn u samayn doonaa in diinta youku videos.
Tayada wax soo saarka ee arjigan si fudud laga beddeli karaa iyadoo la qabsado dhinacyo sida heerka yara iyo sidaas. Waxaad ka iibsan kartaa sofware muddo 40 $ -one lacagta waqtiga.
Ugu dambeyntii, waxaa jira video ah Converter iskysoft producy ah iSkysoft.
Sofware waxaa aad amarkiisa labada Mac iyo daaqado ka saarista ee audio ka video files kala duwan ee wax soo saarka presets filaayo in kombuyuutarrada gacanta ugu. Tani waa qalab la shaqeeya Heer sare ah ku-oolnimada in diinta ee youku videos. Its tayada yimaado qiimo weyn iyo sidoo kale la siiyey in ay qiyaastii u dollars.
Hadda waxaad ogaan tobankii waxyaabaha ugu fudud iyo website-ka dhigi doonaa in aad nolosha la aan xuduud lahayn youku.
> Resource > MP3 > 10 Dariiqo badbaadi youku sida MP3